Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Midnimo Dhagaxlay Oo Nabad Ku Dhamaaday.
Shirkii Faraca Midnimo Dhagaxlay Oo Nabad Ku Dhamaaday.
Posted by Dulmane	/ May 1, 2016
Maanta oo sabti ahayd taariikhduna ay kubeeg nayd 30/4/16 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ka dhacay shirkii caadiga ahaa ee Faraca Midnimo ee xerada kahowl gala.
Shirka ayaa furmay abaare 2:00 duhurnimo waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi baliiq ah oo kusaab sanaa cabsida Allaah iyo amar qaadashadiisa oo ay kamid tahay in si dhab ah looqaato waxyaabaha uu Allaah ina faray sida Jihaadka oo lagu xusay meel sare.
Intaas kadib waxaa sitoos ah looguda galay qodobadii shirka oo waxaana warbixin dal iyo dibad ah laga dhagaystay xoghayaha Faraca Midnimo mudane Cabdi qani wuxuuna mas’uulku siqota dheer uga warbixiyay wararka gudaha ogadenia iyo dibadaba.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay qaar kamid ah xubnihii kasocday faracyada xerada dariska la ah sida Xagardheere iyo Ifo waxayna mas’uuliyiintu si qoto dheer uga war bixiyeen deegaanadii ay kayimaadeen iyo faracyadii ku dhaqnaa waxayna kalmada dhaxal gal ah u jeediyeen dhigooda Midnimo Dhagaxlay.
Intaas kaddib waxaa hadalka looqaybiyay qaar kamid ah mas’uuliyiinta faraca sida Hogaanka Arimaha Bulshada ee Faraca iyo Gudoonka Gudiga Goxootiga Ogadenia ORCC waxayna bulshada dhagahooda kushubeen erayo macaan oo ay bulshadu u baahnayd.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa lagaadhay xiligii afkaarta waxaana hadalka lagu soo wareejiyay xubnihii shirka fadiyay waxaana hadal dhaxal gal ah laga dhagaystay gudoomiyaha odayaasha Ogadenia Duq Saxane oo yidhi anigu waxaan ku dhashay gumaysi dhexdii waana ku gaboobay ee dhalin yarooy haku gaboobina gumaysi dhexdii ee fadhiga kakaca. Sidoo kale waxaa afkaar muhiim ah madasha keenay qaar kamid ah xubnihii faraca waxaana kamid ahaa in loodiyaar garoobo jiida hore ee dagaalka.